China Express Service sevhisi uye mumiririri | Sunson
Kuendesa neako wega Express account kwakanyanya kudhura? Saka wadii kutumira nechidimbu chedu? Isu tinopa vatengi kuratidza basa seDHL, UPS uye EMS pamitero yakadzikiswa. Kukurumidza kuendesa pamitengo yezvehupfumi, iwe unofanirwa kuishandisa.
DHL inotsigirwa neDeutsche Post DHL, rinozivikanwa pasi rese repositi uye logistics boka. Inonyanya kusanganisira anotevera mabhizimusi mayuniti: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight uye DHL Supply Chain. Muna 1969, DHL yakavhura nzira yavo yekutanga yekuburitsa nzira kubva kuSan Francisco kuenda kuHonolulu. Kubva ipapo, yakaenderera mberi ichikurumidza kumhanya zvinoshamisa uye ave mutungamiri wemusika muindasitiri yepasirese yekuendesa. Inogona kutumirwa kunyika mazana maviri nemakumi maviri nematunhu epasirese, inovhara zvinopfuura nzvimbo zana nemakumi maviri ezviuru (nzvimbo huru dzepositi yenzvimbo), uye inopa masevhisi eruzivo nekambani kumakambani emakambani uye epachivande. Kunyangwe iri gwaro kana pasuru, ingave inounzwa pazuva rimwe chete, mukati memuganhu wenguva kana mukati mezuva rakaganhurirwa, DHL International Express inogona kupa masevhisi anozadzisa zvaunoda. Mutengo unonzwisisika uye kuendesa kwacho kunokurumidza. Iyo ndiyo yaunofarira epasirese kuratidza basa.
UPS International Express yakavambwa muUnited States uye ndiyo yepasirose kambani hombe yekutakura pasuru. Iyo yakazvipira kutsigira pasirese bhizinesi kusimudzira. Ichowo chinotungamira chinopa chekufambisa kwehunyanzvi, logistics, uye e-commerce masevhisi, inoshandira nyika dzinopfuura mazana maviri nemakumi maviri nenharaunda, kukupa iwe yemhando yepamusoro uye nekukurumidza kuratidza sevhisi.
Fedex sevhisi yakakamurwa kuita yekutanga mhando (IP) uye hupfumi mhando (IE), kukoshesa (IP) kuratidza sevhisi: nguva yekureva 2-5 mazuva ekushanda, hupfumi (IE) kuratidza basa: nguva yekureva 3-7 mazuva ekushanda, Ndiyo kambani hombe yepasirese inoburitsa pasi rose, iri kushandira nyika dzinopfuura mazana maviri nemakumi maviri nematunhu pasi rese. Iyo yakatambanuka-yakatambanuka, yakachengeteka uye yakavimbika, inokurumidza-nguva, pasuo nesuo pasirese kuratidza basa. Iyo yakakodzera kutakura yakakwira-kukosha, inotora nguva-inotumirwa, uye inopa inokurumidza uye yakavimbika masevhisi masevhisi.
EMS International Express (Worldwide Express Mail Service) ndeyekunze tsamba tsamba yekuratidzira sevhisi inotungamirwa neUPU. EMS yepasi rose inoratidzira bhizinesi inonakidzwa nekugadziriswa kwekutanga kodzero mune dzakasiyana posta, tsika, ndege uye mamwe madhipatimendi. Yekumhanyisa-kumhanya uye kwakakwira mhando kuendesa kwedzimwe nyika emergency tsamba, zvinyorwa, zvemari zvikwereti, zvigadzirwa sampu uye mamwe magwaro uye zvigadzirwa kune vashandisi. EMS yepasirose expression haidi kuwedzerwa mafuta ekuwedzera uye inogona kusvika 210 nzvimbo dzakatenderedza pasirese. Iyo yekujekesa tsika kubvumidzwa kugona kwakasimba, uye tsika kubvumidzwa kwakabatana nepositi.
Taura Yenyika Dzese Dhirivhari Services